Goobaha Khadka Tooska ah ee Biljimka - Xeerarka Koodhadhka Khadka Tooska ah ee Casriga ah
(434 votes, celcelis ahaan, 5.00 out of 5)
Loading ... Khamaarista ee Belgium
Beljim waxay leedahay taariikh aad u hodan ah oo soo if bixida iyo horumarka khamaarka. Taariikhyahanadu waxay halkan ka heleen dukumintigii ugu horreeyay ee lagu xuso kaararka ciyaaraha ee Yurub, kaas oo taariikhdiisu ahayd 1300 mi muddo sanado ah, qarnigii shan iyo tobnaadna Beljam ayaa lagu qabtay bakhtiyaanasiibkii ugu horreeyay.
Laga soo bilaabo 1999, ganacsiga khamaarka ee Beljimka waxaa loo arkaa inuu yahay mid sharci ah, waa sanadkaan 7-da May waxaa la soo saaray sharci sharciyeeyay qabashada khamaarka dalka. Sannadaha soo socda sharciga ayaa la soo saaray wax-ka-beddelka, laakiin isagu weli waa aasaaska sharciga ee khamaarka Belgium. Maanta waxay xakameysaa howlaha khamaarka Guddiga Khamaarka, oo la aasaasay 1999. Hay'adani waxay ka shaqeysaa shatiyeynta, iyo sidoo kale xakameynta howlaha casino waxayna ilaalineysaa xuquuqda ciyaartoyda.
Macluumaadka loogu talagalay booqdayaasha galka khamaarka ee internetka, Beljamka waxaa ka mamnuuc ah booqashada dadka qamaarka ka yar 21 sano, iyo sidoo kale xubnaha garsoorka iyo booliska. Kuwa dambe ayaa booqan kara xarumaha khamaarka kaliya marka laga hadlayo waxqabadka waajibaadkooda.
Khamaarinta khadka tooska ah ee Belgium
Iyadoo la raacayo sharciga qamaarka internetka ee Beljamka, si shirkaddu ay adeegyo ugu fidiso qamaarka internetka ee waddanka, waa inay sidoo kale xal u noqotaa xarumaha khamaarka dhulka. Guddiga Khamaarka Belgium wuxuu si dhow ula socdaa hirgelinta sharciga wuxuuna si joogto ah u sameeyaa liisaska madow ee goobaha khamaarka caalamiga ah ee Beljam, oo ka shaqeynaya waddanka si sharci darro ah. Ku xad gudubka hawlwadeenada sharciga ayaa wajahaya ganaaxyo, qadarkooda uu gaari karo 100 kun oo Yuuro.
Liiska ugu sareeya ee 10 Belgium
Khamaarista ee Belgium
Safarkayagu wuu sii socdaa, iyo habka waddanku u yahay CasinoToplists Gothic castles, waffles macaan iyo shukulaatada - Belgium. Aan aragno waxyaabaha xiisaha leh ee sugaya dalxiisayaasha iyo qamaarayaasha dalka jooga.
Beljim - Erayo kooban oo ku saabsan taariikhda iyo booska juquraafi ahaan;
casinos dhulka ku salaysan ayaa loo ogol yahay 1999;
dhammaan waddanka oo dhan 9 casinos;
xeerarka adag iyo kormeerka gobolka;
21 sano jir.
Shan goobood oo ku yaal Belgium Belgium oo leh cinwaanada caasimadda;
Goobta Belgium iyo asalka taariikheed ee kooban
Bilowgii qarnigeenna dhulka ay degto maanta qabaa'illada Belgic Belgic way noolaayeen, waxay lahaayeen asal Celtic. Waxay ka timid magaca qabiilka waxayna asal ahaan ka soo jeeddaa magaca waddanka.
Xilligaas, Biljim waxay ka mid ahayd boqortooyadii Burgundian, Rome, Spain, waxay ka mid ahayd Netherlands iyo xitaa Faransiiska.
Xilligii go'aanka dalku gaadhay wuxuu ahaa kacaankii Beljam ee Sebtember 23, 1830 - Beljim waxay ku dhawaaqday boqortooyo madax-bannaan, halka isteerinka uu noqonayo King Leopold I. Beljamka aad bey u dhibtoodeen aniga iyo Dagaalkii Labaad ee Adduunka - in badan oo magaalada ka mid ah ayaa ku dhowaad gebi ahaanba burburay, laakiin ku saabsan hoos u dhaca dhaqaalaha oo dhaha xisaab la'aan.
Hadda nidaamka siyaasadeed ee Beljam waa boqortooyo dastuuri ah oo baarlamaani ah. 21/07/2013, dalka waxaa xukuma King Philip. Dalku wuxuu u qaybsan yahay 3 gobol (Flemish, Walloon iyo Brussels-Capital), 2-da ugu horraysa oo loo qaybiyay gobollo iyo in ka badan.
Burburinta iyo khamaarka ee Belgium
Sannad biyo-qabad ah oo loogu talagalay hay'adaha khamaarka ee Beljamka ayaa bilaabmay 1999 - waxay markaa ahayd markii sharciyada iyo wax ka beddelka lagu sameeyay la ansixiyay, kuwaas oo weli nidaaminaya howlaha casinos iyo hoolalka khamaarka. Wadar ahaan Beljamka 9 casinos ee hadda jira: 1 wuxuu ku yaal magaalada caasimadda ah - Brussels, 4 iyo casinos ee gobollada Flemish iyo Walloon ee Ostend, Namur, Spa, Knokke-Heist, iwm.
Kasino kastaa waxay ku shaqeysaa shati waxayna leedahay sanduuq dammaanad qaad ah - taasi waa, deebaajiga in haddii wax waliba u bixi karaan inay ku guuleystaan ​​lacag bixin ama liisan.
Kaqeyb gasho casinos kaliya dadka gaadhay heerka ugu sarreeya ee 21 sano (waxay u baahan yihiin baasaboor). Casin kasta wuxuu helayaa tusmadiisa kaararka ciyaartoyda waana inuu kaydiyaa xogta 10 sano. Khamaaristaha iyo hoolalka khamaarka looma oggola wakiilo ka socda garsoorka, garsooraha, nootaayooyinka iyo booliska. Marka laga reebo, dabcan, dadkani waxay gutaan waajibaadkooda.
Sidoo kale fikradaha naadiga waxaa laga yaabaa in la xiro marka la codsado dhakhtar, daryeel bixiye, qof qaraabo dhow ah oo keenaya dukumiintiyo habboon oo xaqiijinaya ku tiirsanaanta khamaarka inuu doonayo inuu ciyaaro. Kaliya ciyaaryahanka ayaa codsan kara inuu xannibo marinkaaga - waa inay ogeysiisaa kaliya casino.
Sidii aad hore u fahantay, Beljamku wuxuu si khaas ah u khamaarayaa isla markaana isla caddaalad ah.
Caasimadda waddanka - Brussels - casino «Grand Casino Brussels Viage» Waxay martigelisaa tartamada turubka SIT & GO'S maalmaha Isniinta iyo Arbacada, iyadoo laga iibsanayo $ 60, lacag-la-aan-xad-dhaaf ah Hold'em ama Omaha ayaa lagu qabtaa maalin kasta khamaarka lagu qabto tartamada turub-ka ee heerka WPT (... World Poker Tour) Casino waxay bixisaa xulashooyin badan oo boosas ah - 375 mashiin oo qiimahoodu yahay 1 cent ilaa 1 euro, blackjack, roulette, baccarat., Mahjong iyo Money Wheel Macaamiisha dalbanaya waxaa ku yaal hoolalka VIP-da oo leh menu gaar ah oo sigaar ah iyo whiskey tayo sare leh.
museum of biir ah (Belgische Brouwers). Cinwaanka: Xarunta weyn, 10. Halkan, kuwa jecel khamriga biirka waxay awoodi doonaan inay arkaan bandhigga qarnigii 18aad, sidoo kale waxay waxbadan ka bartaan cabitaanka casriga iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada warbaahinta badan. Soo galitaanka matxafka waa € 5.
Matxafka “Autoworld» (Autoworld). Cinwaanka: Parc du Cinquantenaire, 11. Halkan, hal saqaf hoostiisa, matxafku wuxuu ka kooban yahay in ka badan 400 oo nooc oo gawaari ah: guridda, cayaaraha, xiddigaha baabuurta, gawaarida bey'ada, gawaarida dowladda hoose iyo mootooyinka. Tigidhada dadka waaweyn - € 9, carruurta (laga bilaabo 6 illaa 12 sano) - € 5, ka hooseeya - bilaash.
Astaanta taallada Brussels 'Atomium'. Cinwaanka: Avenue de l'Atomium, 1020. Ku xigta saldhigga mitrooga ee Heizel. Taalladaani waa shaashad muraayad ah oo atom bir ah, oo ballaadhisay 160 bilyan oo jeer. Dhererka 102 mitir, culeyskiisuna waa ilaa 2,400 tan. Dhismo aad u qurux badan!
Baarkinka "Mini-Europe". Goobta: agagaarka taallada "Atomium". Beerta waxaa ku jira meelaha ugu quruxda badan Yurub, oo lagu sameeyay qiyaasta 1 illaa 25. Wadar ahaan, waxaa halkaas lagu soo bandhigay 80 magaalo iyo 350 walxaha. Kuwa ugu caansan, dabcan, Big Ben, Eiffel Tower iyo Leaning Tower iyo jidadka Venetian.
Matxafka majaajillada. Cinwaanka : Xarunta Xarunta Jilibka ee Belian 20 Rue des Sables (Zandstraat). Taageerayaasha majaajillada ayaa ku raaxeysan doona bandhigga matxafka, oo ay ku jiraan in ka badan 25,000 oo shaqooyin ah oo ka socda "gadhka" ilaa iyo maanta. Dhanka kale, waxay ku nooshahay Belgium tirada ugu badan ee qorayaasha buugaagta maadda ah.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Belgium iyo Belgians
Waxay hoy u tahay in ka badan 10 milyan oo qof - ajaanib fara badan;
Wadanku wuxuu soo saaraa in kabadan 800 oo nooc oo biir ah, sanadkiina qofkasta oo wadankaan kunool wuxuu cabaa ilaa 150 litir. Kaliya halkan waxay soo saartaa sanadkiiba 220,000 tan oo shukulaato ah - waa 22 kg qofkiiba. Sayidyada reer Belguim waxay la yimaadaan nooc "praline" ah;
Dhalo yar oo biir ah - 0.25 litir, iyo in ka badan - 0.33 litir, iyo dhalooyin cabbirkoodu u eg yahay 0.5 si dhib yar loo heli karo;
Flanders, ku hadal inta badan Nederlandka iyo Wallonia oo Faransiis ah. Xaaladdan oo kale, Flemings waa valontsam aad u qabow;
Dadka reer Belguimku waa dad edeb badan oo ku nool jadwal - kaliya waa la buuxiyey booqashada ka dib xafladda aad u badan tahay inaadan guuleysan;
Belgium - waa dal horseed ka ah jarista dheeman;
93% qoysaska waxay leeyihiin guri xayawaan kasta;
Badi dadka Belgiamku waxay doorbidaan inay cunaan guriga iyo makhaayadaha iyo makhaayadaha;
Tirada caanka ah ee "Manneken Pis" inta lagu jiro xafladaha iyo dabaaldegyada ayaa ku labisan dharka, dhammaantoodna waxaa laga sameeyay qiyaastii 600;
Axadda, qofna halkan ma shaqeeyo - xitaa farmashiyaha;
Halkan waxaa lagu soo bandhigay qafaashka, rinjiga saliidda iyo kabaha roogga.
Belgium oo ku taal khariidadda Yurub
0.1 Khamaarinta khadka tooska ah ee Belgium
0.2 Liiska ugu sareeya ee 10 Belgium
3 Khamaarista ee Belgium
3.0.1 Goobta Belgium iyo asalka taariikheed ee kooban
3.1 Burburinta iyo khamaarka ee Belgium
3.1.1 Soojiidashada Brussels
3.1.2 Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Belgium iyo Belgians
3.1.3 Belgium oo ku taal khariidadda Yurub
casino cat cat